Kubatwa nevashanyi: Vana muBrunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand neVietnam.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Kubatwa nevashanyi: Vana muBrunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand neVietnam.
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Brunei Breaking Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Laos Kuputsa Nhau • LGBTQ • vanhu • Dhinda Zviziviso • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vashanyi vanobata chibharo vana muBrunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand neVietnam; ichokwadi chinosuwisa cheindasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya. Kunyarara hakusi kuita.
Mitemo yechinyakare uye kusasimba kwekutevedzwa kwemutemo kuri kuwedzera njodzi yekubatwa chibharo kwevana muSoutheast Asia unodaro mushumo mutsva.
Zvinhu zvechivanhu zvekushungurudzwa kwevana, zvakaita sekuroorwa kwevana nekutengeswa kwevanhu zviri kuramba zvichinetsa, inodaro NGO ECPAT International ”Kuita Zvepabonde kweVana muSoutheast Asia, ”Inoongorora zvinoitika munyika gumi nenhatu dzemudunhu iri. Nekudaro, iro gwaro rinoti izvi zvakawedzeredzwa mumakore apfuura nedanho repasi rekuziva nezvenyaya iyi, pamwe nekuwedzera kwekushanya kwenzvimbo uye kuwanda kweInternet.
"Kukurumidza kukura kwekushanya kunowedzera kubatwa zvisina kufanira kwevatano muvana mudunhu iri," chidzidzo chacho chakadaro. "Zvimwe zviri kuwedzera mamiriro ezvinhu kwave kuri kukura kunoshamisa muInternet uye matekinoroji ekutaurirana, ayo akawedzera uye akapa mikana yakasiyana yekubata vana pabonde, kana kuti kuwana purofiti kubva mukubatwa kwevakadzi pabonde."
ECPAT inoti izvo zvinokonzeresa njodzi idzi inzvimbo yepamutemo isina kusimba munyika zhinji dzekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, izvo zviri kubvumidza vatadzi kuti vasaite chirango. Uye havazi ivo vekunze chete vane mhosva, vatadzi nhasi vanonyanya kubva mudunhu. "Kunyange vashanyi vanobva kunyika dzekuMadokero vachiri chinetso chakakosha, fungidziro isiriyo ndeyekuti ndivo vazhinji vevapari vemhombwe dzevana," anodaro Rangsima Deesawade, Regional Coordinator weECPAT weSoutheast Asia. "Mhosva zhinji muSoutheast Asia dzinoitwa nevanhu venyika dzedunhu iri kana mamwe matunhu eAsia."
Sekureva kwechidzidzo chitsva ichi, nepo nzvimbo dzechivanhu dzekushanya dzakadai seThailand nePhilippines dzichiramba dzichityisidzira vana, nekuda kwenzira dzakachipa dzekufamba uye pekugara, dzimwe nyika dzakaita seCambodia, Indonesia, Myanmar neViet Nam dzave nzvimbo dzinozivikanwa dzevana. vanoita zvepabonde.
Chirevo ichi chinoratidza zvakare kuwedzera kwengozi kunowanikwa nekuwedzera mukana weInternet, iyo yati iri kuisa vana panjodzi nekuvaisa panjodzi huru yekushungurudzwa nekushungurudzwa. Inoti kugadzirwa kwezvinhu zvepamhepo zvevana pabonde muPhilippines izvozvi zvinoita mari inosvika US $ 1 bhiriyoni yemari yegore; dzimwe nyika mudunhu dzinoonekwa senzvimbo huru dzemifananidzo yekushungurudzwa kwevana pabonde; uye muLao PDR, zvimwe zvitoro zveCD zvinotengesa pachena zvinhu zvekushungurudzwa kwevana pabonde.
"Kutyisidzirwa kwekushungurudzwa kwepabonde paIndaneti chimwe chinhu chinotarisana nevana pasi rose," anodaro Deesawade. "Uye Southeast Asia painowedzera kubatana, inova yakabatana nedambudziko repasi rese."
Zvimwe chokwadi / zvinotungamira zvakasimbiswa nemushumo zvinosanganisira:
Pachine makakatanwa makuru mukunzwisisa kwekushungurudzwa pabonde kwevana mudunhu iri. Zvakawanda kutsvagurudza zvinodiwa;
Maitiro ekugumbura akasiyana pakati pevafambi vanobva kunyika dzakasiyana. Semuenzaniso, varume veAsia vanowanzo shungurudza vasikana vadiki, kusanganisira vasikana vadiki kwazvo mhandara, nepo vatadzi vekuMadokero vane mukana wakanyanya kupfuura vekuAsia kusvika vakomana vadiki nechinangwa chekubata chibharo.
Vanokanganisa vana pabonde vari kuramba vachitsvaga vana kuburikidza nekuzvipira kana nzvimbo dzehunyanzvi, senge nekuwana basa kana mikana yekuzvipira muzvikoro, dzimba dzinochengeta nherera, uye mumaNGOs;
Muguta reCebu muPhilippines, imwe yenzvimbo dzine hurombo kwazvo munyika, 25 muzana yevashandi vebonde mumigwagwa vanobatwa chibharo nevana;
Mune ongororo yevakomana vanoshanda mumigwagwa muSihanoukville, Cambodia, 26 muzana yevakabvunzwa vakaratidza kuti vakaita zvepabonde nevanhu vakuru vachitsinhana mari, chikafu kana zvimwe zvakawana uye mabhenefiti;
Michato yenguva pfupi iri kuwedzera muIndonesia. Nevasikana veIndonesia vachimanikidzwa kuroorwa, aya anonzi 'michato yemutah', anopa mikana kuvarume vekunze, kunyanya vanobva kuMiddle East, kushandisa vana pabonde. Kutengeswa kwevana kuri kuwedzera kuitira kuti vawane izvi; uye
Vasikana nevakomana vane makore gumi nemaviri uye kunyange vadiki vanoendeswa kuThailand kunoita basa rekutengesa bonde. Zvinotendwa kuti vamwe vabereki vakatengesa vana vavo zvakananga muindasitiri yebonde, nepo mune dzimwe nguva vana vanotanga kunyoreswa kunoshanda mune zvekurima, sevashandi vepamba kana mamwe maindasitiri asi ivo vozotengeswa muindasitiri yebonde yeThailand.
Kuita Zvepabonde kweVana muSoutheast Asia kuongororwa kwedesiki kwemabhuku kubva ku12 Southeast Asia nyika (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand neViet Nam). Inotaridza zvakati wandei zvine chekuita nezve kusimuka kwekushungurudzwa pabonde kuri kuitika mudunhu rese.
Nezve mushumo uzere: http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf
ECPAT International inzvimbo yepasi rose yemasangano akazvipira kupedza kushungurudzwa kwevana pabonde. Nenhengo zana negumi nenhatu munyika makumi mapfumbamwe nematatu, ECPAT inotarisa pakutengeswa kwevana kuita zvepabonde; kushandiswa kwevana kuburikidza nehure uye zvinonyadzisira; online online kubatwa kwevakadzi pabonde; nekushungurudzwa pabonde kwevana vari mubazi rekushanya nekushanya. IEECPAT International Secretariat iri muBangkok Thailand.
Vafambi vasina kuvhenekerwa kubva kuUK, Spain, Portugal ...
Rhino Tourism yakaziviswa muTanzania Mkomazi Park
US Kufamba kuenda kuEurope: Mutungamiri Kuburitsa Mashoko mu ...
Tungamira ndege kubva kuMunich kuenda kuDubai kuLufthansa izvozvi
Air Canada inozivisa kusarudzwa kwevatungamiriri
Jamaica Tourism kuti ubatsirwe kubva pamadhora makumi manomwe emamiriyoni echikwereti ...
Nyowani India Tourism Gurukota rinopa indasitiri tariro
Saint Lucia inogadziridza paDutu Elsa